Kuzunzwa kweZBC naVaMoyo Kotaurwa neVaongorori
WASHINGTON DC — Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti danho rakatorwa negurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaJonathan Moyo, rekuvandudza zvinhu kuZimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC, rinogona kunge rakanangana nekuedza kuvandudzwa kwenhepfenyuro iyi.
Vanhu ava vanoti danho iri rinogona riri rekuedza kuti ZBC ifambidzane nedzimwe nhepfenyuro itsva dzave munyika dzakaita seStar-FM neZi-FM, pamwe nekukwikwidzana nenhepfenyuro yeStudio7 iyo inoteererwa zvakanyanya munyika.
Mukuru wesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe (YIDEZ), uye vari nyanzvi munyaya dzezve matongerwo enyika, VaSydney Chisi, vanoti danho iri rinogonawo kunge riine chekuita nezvikwata zviri muZanu PF zviri kurwira masimba.
Asi VaChisi vanotiwo kana VaMoyo vakazodoma dzimwe nhengo dzebhodhi vanofanirwa kuisawo vechidiki vane ruzivo nezviri kuitika mudzinhepfenyuro, uye vasina mativi avakarerekera muhondo dzemuZanu PF.
NeChina VaMoyo vakaparadza bhodhi reZBC raitungamirwa namuzvinabhizimusi, VaCuthbert Dube, pamwe nekuendesa pazororo mukuru weZBC, VaHappison Muchechetere.
VaMoyo vanonzi vakatora danho iri mushure mekuona mafambisirwo aiitwa basa nebhodhi iri, iro rinonzi rakatadza kuunza shanduko yaitarisirwa kunhepfenyuro iyi.
Maneja mukuru wedivi rezvenhepfenyuro dzerhedhiyo, VaAllan Chiweshe, ndivo vanonzi vakabva vagadzwa kuitwa mukuru weZBC vakafanobata matomu.
Vamwe vaive mubhodhi iri vanosanganisira Amai Doreen Sibanda, VaGibson Mashingaidze, muimbi Bob Nyabinde, mufundisi Trevor Manhanga naVaFelix Muchemwa, avo vaimbwe muchiuto.